iTech Media – Page2– Online News and Media Sharing
ဆိုငၠယ္ ေမာင္းသူေၾတ ေအ႐ြ႕ဖက္ ေအာကၼီးကို ေန႔ေရာ ေညရာျဖင့္ၿပီး ေမာင္းရမယၱဲ့ . . .
ဆိုင်ကယ် ကားမောင်းနှင်သူ ယာဉ်မောင်းတိုင်း သိထားရမယ့် ဥပဒေအသစ်ပါ …ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို ပါတယ် … ဆိုင်ကယ် ၊ ကား ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ ယာဉ်မောင်းနှင်သူများအားလုံး သိထားသင့်တဲ့ဥပဒေမို့ သာမန်အရပ်သားနားလည်ဗဟုသုတရအောင် အဓိကအချက်များ ပြောပြပေးသွားပါမယ် … ပုဒ်မ-(၂၉)(က) မော်တော်ယာဉ်ကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလိုရင် မှတ်ပုံတင်အရာရှိကို ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရမယ် … ပုဒ်မ-(၂၉)(ခ) မော်တော်ယာဉ် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခွင့်ကို
“တ စ္ ည ကို(၈၀၀၀)ေ ပးမယ္ ဆိုၿပီး ေျပာခံ ရတယ္ လို႔ ရင္ဖြင့္ လာ တဲ့ သင္းသင္း(႐ုပ္သံ)”
တစ္ ညဘယ္ေလာက္လဲ၊ တစ္နာရီဘယ္ေလာက္လဲ လာေမးၾကတဲ့လူေတြေတာင္ရွိတယ္၊ အစ္မက ကိုယ့္ဘဝကို တစ္သက္လုံးတာဝန္ယူႏိုင္ရင္တစ္မ်ိဳးေပါ့။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ဘယ္ေတာ့မွ လုပ္မစားဘူး။ လုပ္စားခဲ့ရင္ ခဏေလးနဲ႔ သူေဌးျဖစ္ေနတာၾကာၿပီေလ။ အစ္မက ေပါက္ကရေျပာလည္း ေတာ္႐ုံေတာ့ သည္းခံတယ္၊ သည္းမခံႏိုင္တဲ့အဆုံးမွာ တရားခံေျပးျဖစ္ေအာင္လုပ္ပစ္လိုက္မယ္ဆိုတဲ့ .. သင္းသင္း ။တစ္ညဘယ္ေလာက္လဲ၊တစ္နာရီဘယ္ေလာက္လဲလာေမးၾကတဲ့လူေတြေတာင္ရွိတယ္၊ အစ္မက ကိုယ့္ဘဝကို တစ္သက္လုံးတာဝန္ယူႏိုင္ရင္တစ္မ်ိဳးေပါ့။ အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲ ဘယ္ေတာ့မွ
အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ထရမ့္ မနုိင္ခဲ့ရင္ ျမန္မာအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္တဲ့ အခ်က္မ်ား
အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ အေနနဲ႔လာမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ အႀကိဳ စစ္တမ္း ေတြမွာ အေရးမလွ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရေတာ့လည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ မိ တယ္ ။ ဒီလို စိတ္မသက္သာ ျဖစ္ရ တာက မစၥတာ ထရမ့္ အတြက္ မဟုတ္ ပါ ဘူး ။ ျမန္မာျပည္
ကျွန်တော်မိတ်ဆွေ ဂျပန်ကြီးက ပြောတယ်, မင်းတို့မြန်မာပြည်က လုပ်ငန်းရှင် တွေ တကယ် တော်တယ်,တကယ် အလုပ်လုပ်ချင် စိတ်ရှိကြတယ်လို့ ချီးကျူး စကားပြောလာပါတယ်. ကျွန်တော်ကလည်း သူကိုပြန်မေး တာပေါ့ ဘာကြောင့်လည်း လို့ သူကပြန်ပြော ပါတယ်. အခုလို ကိုလိုနာ ဗိုင်းရစ်ကြောင့် နိင်ငံပေါင်းများစွာမှာ စတော့တွေကျ,အလုပ်အကိုင်တွေ ရပ်လို့ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ အသီးသီးက သူတို့နိင်ငံက
ယနေ့ နေ့လ ည် ၁၂း၁၉ နေလနှ စ်ပါးဆိုင် နေကြတ် မည်
ယ ​နေ့(ဇွန်လ ၂၁) နေ့လည် ၁၂ နာရီ ၁၉ မိနစ်အချိန်မှာ ၂၀၂၀ ရဲ့ပထမဆုံး နေကြတ်ချိန်ရောက်လာပါမယ်။ ရန်ကုန်မြို့အတွက် နေကြတ်ချိန် (မြန်မာစံတော်ချိန်) က နေကြတ်ခြင်း စတင်မည့်အချိန် – နေ့လည် ၁၂ နာရီ ၁၉ မိနစ်၊ အမြင့်ဆုံး နေကြတ်မည့်အချိန် – ညနေ ၂